မြန်မာ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍအတွက် ပြန်ပြည့်မြဲ လေစွမ်းအင်
Wind turbines operate atawind farm near Milford, Utah May 21, 2012. The Milford Wind Corridor Project, developed by the First Wind energy company, isa306-megawatt, 165-unit wind farm. Picture taken May 21, 2012.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိက လိုအပ်နေတဲ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍလိုအပ်ချက်ကို လေစွမ်းအင်လို ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်နဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ပါသလား။ ဂျပန်အဏ္ဏဝါဘူမိသိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာဌာန (JAMSTEC) က ဒေါက်တာမိုးကျော်သူကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ “အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ စွမ်းအင်က အတော်လိုအပ်နေပါတယ်။ လေစွမ်းအင်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြောင်းပြီး သုံးမယ်ဆိုရင် သုံးလို့ ဖြစ်ပါ့မလား ပြောပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာမိုးကျော်သူ။ ။ “ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်က အရေးတကြီးပေါ့နော်။ အဓိက လိုအပ်နေတယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ အဲဒါအတွက်ကို ကျနော်တို့ ရေအားလျှပ်စစ်ကို သုံးနေတာလည်း နှစ်ပေါင်းကို ၆၀ လောက် ရှိပြီပေါ့နော်။ အဲဒီ အပိုင်းကလည်း ရေအားလျှပ်စစ်က တည်ဆောက်ရတာ ဟိုးအရင်တုန်းကတော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း ထိန်းသိမ်းရတာ ခက်သလို ဘေးအန္တရာယ် ရှိတဲ့ အပိုင်းလေးးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကုန်ကျစားရိတ်တွေလည်း ရှိတာပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ အဲဒါလေးတွေ တွဲပြီး စဉ်းစားတဲ့ အချိန်မှာ ဒီပတ်ဝန်းကျင်လည်း သန့်ရှင်းတဲ့ ဥစ္စာ၊ ဆိုလာ ကိုလည်း အသုံးပြုလာသလို ဆိုလာပြီးတော့ ဒုတိယကုန်ကျစားရိတ်နည်းပြီး တွက်ခြေကိုက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ လေအား- လေအားပေါ့နော်၊ လေအားက အခုဆို အရမ်းကို ခေတ်စားလာပါတယ်။"
"ခေတ်စားလာတဲ့ အတွက် ဂျပန်မှာဆိုရင်လည်း အခု အရေးတကြီး စပြီးတော့ ပြင်ဆင်လာပါပြီ။ အရင်က မသုံးခဲ့ပေမယ့်။ ဆိုတော့ အဲဒီအပိုင်းလေး တွေကို ကျနော်တို့လည်း ထဲထဲဝင်ဝင် စပြီး လုပ်တဲံ အပိုင်းလေးတွေပါလာလို့ စိတ်ဝင်စားလို့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိတော့ - မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့လို၊ လေအားလျှပ်စစ်ကို အဓိက သုံးနေတဲ့ မြောက်ဖက်က Scandinavia နိုင်ငံတွေ၊ ဂျာမဏီတို့၊ အင်္ဂလန်တို့လို နိုင်ငံတွေလောက်၊ နယ်သာလန်တို့ ဘယ်လ်ဂျီယံတို့လို နိုင်ငံတွေလောက် လေအားက စိတ်တိုင်းကျစရာတော့ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာတော့ ကျနော်တို့ အတွက်က အခုကတည်းက စပြီးပြင်ဆင်၊ ပြင်ဆင်ပြီးတော့ ရေရှည်မှာတော့ သုံးနိုင်မယ် ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။”
မေး။. ။ “ဒီလေအား လျှပ်စစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ သုံးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုစပြီးပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါသလဲ။”
ဒေါက်တာမိုးကျော်သူ။. ။“မြန်မာနိုင်ငံအတွက်က ပြင်ဆင်ဖို့ အထူးသဖြင့် လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ဒီလေအားလျှပ်စစ် ရှိတဲ့ သုံးနိုင်မယ့် နေရာတွေက ကမ်းရိုးတန်း တကျောတွေပါ ခင်ဗျ။ ကမ်းရိုးတန်း တကျောတွေမှာ သေချာ စံနစ်တကျ ဘူမိဗေဒမြေပုံ ထုတ်ထားပြီးတော့ မြေကြီးရဲ့ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား မြေကြီးရဲ့ တည်ငြိမ်မှု အပိုင်းတွေကို သေချာ မြေပုံထုတ်ထားဖို့ လိုအပ်သလို၊ ရေထဲကို နဲနဲ ဆင်းလိုက်ပြီဆိုရင် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာက မြေပုံတို့ဘာတို့ စံနစ်တကျ ထုတ်ထားတာ မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် အဲဒီ အပိုင်းတွေက အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ အခု ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အခက်အခဲဖြစ်နေတာ လည်း အဲဒီ အပိုင်းပါပဲ။ ဒီ ရေထဲမှာ ကမ်းစပ်မှာ ရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ဆောက်မယ် ဆိုရင် လေအားလည်း ပိုရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပိုပြီး ကောင်းမယ် ဆိုပေမယ့်၊ အဲဒီအပိုင်းမှာ အခြေခံကျတဲ့ မြေပုံက မရှိဘူး ဆိုတော့ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကနေ လုပ်ဖို့ ဆိုတာက အတော်ကို ခက်ခဲပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီ အပိုင်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စပြီ ပြင်မယ်ဆိုရင်၊ အခုအချိန်က စပြီး ပြင်မယ် ဆိုရင် နောက် ၅ နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်လောက် ကြာမှာပါ။ အဲဒီ အပိုင်းတွေက။ ပုံမှန်က လေအားလျှပ်စစ်ရဲ့ ဒီတိုင်ကြီးတွေ တခုပြီး တခုရဲ့ ဓါတ်အားထုတ်တဲ့ ဟာ တခုချင်း တခုချင်းကို လုပ်ဖို့ အတွက်ကလည်း စပြီး အကြမ်းဖျင်း လေအား တွက်ချက်တာနဲ့ ညီတဲ့ ခံနိုင်ရည် တို့ကို တွက်တဲ့ဥစ္စာ၊ မြေပုံထုတ်တာနဲ့ ပြင်ဆင်တာတွေ အားလုံးဟာ ၃ နှစ်ကနေ ၅ နှစ် ကျော် အထိလောက် ကြာပါတယ် ခင်ဗျ။ အဲဒါ အတွက်ကြောင့် အခုကနေ စပြီး ပြင်ဆင်မယ် ဆိုရင်တော့ အနေတော်လောက် ဖြစ်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်။”
မေး။. ။“ဟုတ်ကဲ့။ ပြင်ဆင်မယ် ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘယ်အပိုင်းတွေက ဒီ လေအား လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ အတွက် ကောင်းတဲ့ နေရာတွေ ပါလဲ။”
ဒေါက်တာမိုးကျော်သူ။. ။“ဟုတ်ကဲ ခင်ဗျ။ နိုင်ငံတကာ ဒီစွမ်းအင် အကြံပေးအဖွဲ့ တွေက ဒီ ၂၀၁၅ နဲ့ ၁၆ ခုနှစ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရဆီကို အစီရင်ခံစာ တင်ထားးတဲ့ဥစ္စာမှာ စံနစ်တကျ သေချာ တိုင်းတာ ထားးတဲ့ မြေပုံတွေလည်း ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျ။ အခု ပြထားတဲ့ ဒုတိယ မြေပုံမှာလည်း ပြနေပါတယ်။ ဆိုတော့ ရခိုင်ကနေ စပြီးတော့ပေါ့နော်။ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း တကျောလုံးက အကောင်းဆုံး နေရာထဲမှာ. ပါတယ်။ ပြိးတော့ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က ကမ်းရိုးတန်း နေရာတွေ။ ပြီးတော့ မွန်ကနေ သွားပြီးတော့ တနင်္သာရီ ကမ်းရိုတန်း တလျှောက် ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း တကျောပါပဲ ခင်ဗျ။
တောင်ပေါ်ဒေသတွေကတော့ အများစုက လေအား ကောင်းတယ်လို့ တွက်ချက် မထားပါဘူး။ လေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လောက်အောင် မကောင်းပါဘူး။ လေက မြေပြန့်ထက်စာရင်တော့ ပိုပြင်းရင် ပြင်းမယ်။ တနေရာပဲ ရှိပါတယ်။ မြောက်ဘက်က ပူတာအို ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဘက် ပူတာအို. ပတ်ဝန်းကျင် တကျောကတော့ လေအား ကောင်းတယ်လို့ မြေပုံထဲမှာလည်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်”
မေးး. ။“ဒီ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လေအားလျှပ်စစ် သုံးဖို့အတွက် နေရာတွေ တည်ဆောက်မယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုး ပုံစံနဲ့ စပြီးတည်ဆောက်ရမလဲ ရှင်းပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာမိုးကျော်သူ။. ။“အဲ ပထမတော့ လေအားကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ဆိုတာကို နှစ်နဲ့ လနဲ့ချီပြီးတော့ တိုင်းတာဖို့ လိုပါတယ်။ စံနစ်တကျပေ့ါ။ တိတိကျကျ တွက်နိုင်မှ ကောင်းနိုင်တယ် ဆိုတာ သူက လေအားထုတ်တာက သူက တိုင်ထောင်တဲ့ နေရာမှာ တိုင် တခု တခုချင်း ကနေပြီးတော့မှ ဒလက်တွေလာမယ်။ တာဘိုင်လို့ခေါ်တဲ့ ဒလက် အကြီးကြီးတွေ လာမယ်။ ပြီးရင် တိုင်ကနေပြီးတော့မှ စံနစ်တကျ ကြိုတွေနဲ့သွယ်တန်းပြီးတော့ အားကို ထုတ်တဲ့သဘောပါ။ အဲဒီတော့ ဆောက်လုပ်တဲ့ နေရာ မှားသွားမယ် ဆိုရင် ဒီတိုင်ကို ရွှေ့ဖို့မလွယ်သလို နောက်ပိုင်းမှာ မြေခွင့်ပြုချက်တို့၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ ဘာတို့မှာ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အတွက် အဲဒီင်္အပိုင်းကို အများစုက ကုန်းပေါ်မှာတောင် ၂ နှစ်ကနေြ့ပီးတော့ ၅ နှစ်လောက်ကြာတဲ့ ပြင်ဆင်မှုက ကြာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မြေကြီးရဲ့ ခံနိုင်ရည် အပိုင်းရယ်၊ လေအားရဲ့ အပိုင်းရယ်ကို စောင့်ပြီးတော့ monitor လုပ်ပြီးတော့ တိုင်းမယ်။ ပြီးတဲ့ နောက်မှာမှ သေချာ စံနစ်တကျ အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ဆောက်ပါမယ် ဆိုတဲ့ အစိုးရ သို့မဟုတ် နယ်မြေဒေသ မြေကြီးရဲ့ ပိုင်ရှင်တွေ ဆီမှာ ခွင့်ပြူချက် တွေယူမယ်။ စာချုပ်တွေ ချုပ်မယ်။ ငွေတွေ ချေးမယ်ဆိုပြီး နောက်ထပ် ၂ နှစ် ၃ နှစ် ပြီးမှ တည်ဆောက်တဲ့ အပိုင်းကို သွားပါမယ်။
တည်ဆောက်တဲ့ အပိုင်းမှာလည်း ဒလက်ကြီးတွေက ပုံထဲမှာ ပြထားသလို အကြီးကြီးတွေပါ ခင်ဗျ။ အကြီးကြီးတွေက ရေရှည်မှာ ထုတ်မယ့် အား ကောင်းသလို လေအားလည်း ကောင်းတယ် ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ အဲဒီလို အကြီးကြီးတွေ တည်ဆောက်ဖို့ အတွက်က တစစီကို ဆက်ပြီး တပ်တာမျိုး မဟုတ်ပဲနဲ့ တခုထည်းအနေနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်ရတာမို့ ကျနော်တို့က ဘယ်ကနေ ဝယ်မှာလည်။ နော်ဝေကနေ ဝယ်မယ် ဆိုရင် အဝေးကြီးလာရမယ်။ ကုန်ကျစားရိတ်ကလည်းများမယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတာလေး တခုတော့ ရှိတာပေါ့နော်။ တရုတ်နိုင်ငံက ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက် အတွင်းမှာ အကြီးအကျယ်ကို တပ်ဆင် ပြောင်းလဲနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ ထုတ်ပစ္စည်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဈေသက်သက်သာသာ ရနိုင်တယ် ဆိုတာက ကောင်တဲ့ သတင်းပါ။”
မေး။ ။ “ဟုတ်ကဲ့။ အခု လေအားလျှပ်စစ်ကို ဘာကြောင့်များ အကြံပြုတာပါလဲ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လို ပြောင်းလဲသုံးလာလို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုပါ ဒါမျိုး အကြံပေးတာပါလဲ။”
ဒေါက်တာမိုးကျော်သူ။ ။“ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ အဓိကကတော့ ကုန်ကျစားရိတ်ပါ။ ကုန်ကျစားရိတ်က ဒီလေအားလျှပ်စစ်က ကုန်ကျစားရိတ်က အခုဆို ကမ္ဘာမှာ ဆိုလာပြီးရင် ဒုတိယ အနည်းဆုံး အဆင့်အထိ ရောက်လာနေပြီ။ နောက်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိပေးနေရတဲ့ လျှပ်စစ် မီတာခထက် နဲနဲပဲ ပိုများတယ်။ လေအားလျှပ်စစ်က။”
မေး။ ။“ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လျှပ်စစ်ကို ပေါပေါများများ သုံးနိုင်အောင်အတွက် ဘာတွေ လုပ်သင့်လည်း နဲနဲ ခြုံပြီး ပြောပြပါ။”
ဒေါက်တာမိုးကျော်သူ။ ။ “ ဒီနေ့ ပြောတဲ့ ခေါင်းစဉ်ရဲ့ အဓိကအပိုင်းပါပဲ။ ပြန်ပြည့်မြဲ စွမ်းအင်ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ကျနော်တို့ ပြောင်းရပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက ကောင်းတဲ့အချက်က ဆိုလာကို အဓိကရမှာက မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း။ ပြီးတော့ လေအားလျှပ်စစ် ရမယ့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသ၊ ပြီးတော့ ရေအားလျှပ်စစ်ရတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသတွေဆိုတော့။ ဒေသတွေက မထပ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အဲဒီ အပိုင်းတွေကို ခွဲခြားပြီးလုပ်မယ် ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက smart grid လို့ခေါ်တာ ပေါ့နော်။ လျှပ်စစ်ကို တကယ့်ကို ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ကို ရတဲ့ အပြင်ကို သူ့ဟာသူ စံနစ်တကျလေး သုံးသွားမယ် ဆိုရင် အာဆီယံထဲမှာလည်း ထိပ် ကို ရောက်နိုင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ် ခင်ဗျ။"
မြန်မာနိုိင်ငံမှာ အဓိက လိုအပ်နေတဲ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ အတွက် လေအားလျှပ်စစ်ကို အားကိုးနိုင်တဲ့ အကြောင်း ဒေါက်တာမိုးကျော်သူက ပြောပြခဲ့တာပါ။
မွနျမာ့စှမျးအငျကဏ်ဍအတှကျ ပွနျပွညျ့မွဲ လစှေမျးအငျ
မွနျမာနိုငျငံမှာ အဓိက လိုအပျနတေဲ့ စှမျးအငျကဏ်ဍလိုအပျခကျြကို လစှေမျးအငျလို ပွနျပွညျ့မွဲစှမျးအငျနဲ့ ဖွညျ့ဆညျးပေး နိုငျပါသလား။ ဂပြနျအဏ်ဏဝါဘူမိသိပ်ပံနဲ့ နညျးပညာဌာန (JAMSTEC) က ဒေါကျတာမိုးကြျောသူကို ဒျေါခငျမြိုးသကျက မေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး။ ။ “အခု မွနျမာနိုငျငံမှာ စှမျးအငျက အတျောလိုအပျနပေါတယျ။ လစှေမျးအငျကို မွနျမာနိုငျငံမှာ ပွောငျးပွီး သုံးမယျဆိုရငျ သုံးလို့ ဖွဈပါ့မလား ပွောပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာမိုးကြျောသူ။ ။ “ဟုတျကဲ့ခငျဗြ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ လြှပျစဈက အရေးတကွီးပေါ့နျော။ အဓိက လိုအပျနတေယျ ဆိုတာ မှနျပါတယျ။ အဲဒါအတှကျကို ကနြျောတို့ ရအေားလြှပျစဈကို သုံးနတောလညျး နှဈပေါငျးကို ၆၀ လောကျ ရှိပွီပေါ့နျော။ အဲဒီ အပိုငျးကလညျး ရအေားလြှပျစဈက တညျဆောကျရတာ ဟိုးအရငျတုနျးကတော့ အကောငျးဆုံး ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ ပတျဝနျးကငျြအတှကျလညျး ထိနျးသိမျးရတာ ခကျသလို ဘေးအန်တရာယျ ရှိတဲ့ အပိုငျးလေးးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ကုနျကစြားရိတျတှလေညျး ရှိတာပေါ့နျော။ အဲဒီတော့ အဲဒါလေးတှေ တှဲပွီး စဉျးစားတဲ့ အခြိနျမှာ ဒီပတျဝနျးကငျြလညျး သနျ့ရှငျးတဲ့ ဥစ်စာ၊ ဆိုလာ ကိုလညျး အသုံးပွုလာသလို ဆိုလာပွီးတော့ ဒုတိယကုနျကစြားရိတျနညျးပွီး တှကျခွကေိုကျပွီး ပတျဝနျးကငျြအတှကျလညျး အရမျးကို ကောငျးတဲ့ လအေား- လအေားပေါ့နျော၊ လအေားက အခုဆို အရမျးကို ခတျေစားလာပါတယျ။"
"ခတျေစားလာတဲ့ အတှကျ ဂပြနျမှာဆိုရငျလညျး အခု အရေးတကွီး စပွီးတော့ ပွငျဆငျလာပါပွီ။ အရငျက မသုံးခဲ့ပမေယျ့။ ဆိုတော့ အဲဒီအပိုငျးလေး တှကေို ကနြျောတို့လညျး ထဲထဲဝငျဝငျ စပွီး လုပျတဲံ အပိုငျးလေးတှပေါလာလို့ စိတျဝငျစားလို့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့မိတော့ - မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဖွဈနိုငျပမေယျ့ ဂပြနျနိုငျငံတို့လို၊ လအေားလြှပျစဈကို အဓိက သုံးနတေဲ့ မွောကျဖကျက Scandinavia နိုငျငံတှေ၊ ဂြာမဏီတို့၊ အင်ျဂလနျတို့လို နိုငျငံတှလေောကျ၊ နယျသာလနျတို့ ဘယျလျဂြီယံတို့လို နိုငျငံတှလေောကျ လအေားက စိတျတိုငျးကစြရာတော့ မရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ ရရှေညျမှာတော့ ကနြျောတို့ အတှကျက အခုကတညျးက စပွီးပွငျဆငျ၊ ပွငျဆငျပွီးတော့ ရရှေညျမှာတော့ သုံးနိုငျမယျ ဆိုတာကတော့ သခြောပါတယျ။”
မေး။. ။ “ဒီလအေား လြှပျစဈကို မွနျမာနိုငျငံမှာ သုံးမယျဆိုရငျ ဘယျလိုစပွီးပွငျဆငျဖို့ လိုပါသလဲ။”
ဒေါကျတာမိုးကြျောသူ။. ။“မွနျမာနိုငျငံအတှကျက ပွငျဆငျဖို့ အထူးသဖွငျ့ လိုအပျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျး ဆိုတော့ ဒီလအေားလြှပျစဈ ရှိတဲ့ သုံးနိုငျမယျ့ နရောတှကေ ကမျးရိုးတနျး တကြောတှပေါ ခငျဗြ။ ကမျးရိုးတနျး တကြောတှမှော သခြော စံနဈတကြ ဘူမိဗဒေမွပေုံ ထုတျထားပွီးတော့ မွကွေီးရဲ့ ခံနိုငျရညျစှမျးအား မွကွေီးရဲ့ တညျငွိမျမှု အပိုငျးတှကေို သခြော မွပေုံထုတျထားဖို့ လိုအပျသလို၊ ရထေဲကို နဲနဲ ဆငျးလိုကျပွီဆိုရငျ ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာက မွပေုံတို့ဘာတို့ စံနဈတကြ ထုတျထားတာ မရှိတဲ့ အတှကျကွောငျ့ အဲဒီ အပိုငျးတှကေ အမြားကွီး လိုအပျပါတယျ။ အခု ဂပြနျနိုငျငံမှာ အခကျအခဲဖွဈနတော လညျး အဲဒီ အပိုငျးပါပဲ။ ဒီ ရထေဲမှာ ကမျးစပျမှာ ရှိတဲ့ နရောတှမှော ဆောကျမယျ ဆိုရငျ လအေားလညျး ပိုရတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ပိုပွီး ကောငျးမယျ ဆိုပမေယျ့၊ အဲဒီအပိုငျးမှာ အခွခေံကတြဲ့ မွပေုံက မရှိဘူး ဆိုတော့ ပုဂ်ဂလိက ကဏ်ဍကနေ လုပျဖို့ ဆိုတာက အတျောကို ခကျခဲပါတယျ။ ဆိုတော့ အဲဒီ အပိုငျးကို မွနျမာနိုငျငံမှာ စပွီ ပွငျမယျဆိုရငျ၊ အခုအခြိနျက စပွီး ပွငျမယျ ဆိုရငျ နောကျ ၅ နှဈကနေ ၁၀ နှဈလောကျ ကွာမှာပါ။ အဲဒီ အပိုငျးတှကေ။ ပုံမှနျက လအေားလြှပျစဈရဲ့ ဒီတိုငျကွီးတှေ တခုပွီး တခုရဲ့ ဓါတျအားထုတျတဲ့ ဟာ တခုခငျြး တခုခငျြးကို လုပျဖို့ အတှကျကလညျး စပွီး အကွမျးဖငျြး လအေား တှကျခကျြတာနဲ့ ညီတဲ့ ခံနိုငျရညျ တို့ကို တှကျတဲ့ဥစ်စာ၊ မွပေုံထုတျတာနဲ့ ပွငျဆငျတာတှေ အားလုံးဟာ ၃ နှဈကနေ ၅ နှဈ ကြျော အထိလောကျ ကွာပါတယျ ခငျဗြ။ အဲဒါ အတှကျကွောငျ့ အခုကနေ စပွီး ပွငျဆငျမယျ ဆိုရငျတော့ အနတေျောလောကျ ဖွဈမယျလို့ မွငျပါတယျ။”
မေး။. ။“ဟုတျကဲ့။ ပွငျဆငျမယျ ဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဘယျအပိုငျးတှကေ ဒီ လအေား လြှပျစဈထုတျဖို့ အတှကျ ကောငျးတဲ့ နရောတှေ ပါလဲ။”
ဒေါကျတာမိုးကြျောသူ။. ။“ဟုတျကဲ ခငျဗြ။ နိုငျငံတကာ ဒီစှမျးအငျ အကွံပေးအဖှဲ့ တှကေ ဒီ ၂၀၁၅ နဲ့ ၁၆ ခုနှဈမှာ ကနျြခဲ့တဲ့ ပွညျသူ့အစိုးရဆီကို အစီရငျခံစာ တငျထားးတဲ့ဥစ်စာမှာ စံနဈတကြ သခြော တိုငျးတာ ထားးတဲ့ မွပေုံတှလေညျး ရှိနပေါတယျခငျဗြ။ အခု ပွထားတဲ့ ဒုတိယ မွပေုံမှာလညျး ပွနပေါတယျ။ ဆိုတော့ ရခိုငျကနေ စပွီးတော့ပေါ့နျော။ ရခိုငျကမျးရိုးတနျး တကြောလုံးက အကောငျးဆုံး နရောထဲမှာ. ပါတယျ။ ပွိးတော့ ဧရာဝတီ မွဈဝကြှနျးပျေါက ကမျးရိုးတနျး နရောတှေ။ ပွီးတော့ မှနျကနေ သှားပွီးတော့ တနင်ျသာရီ ကမျးရိုတနျး တလေြှာကျ ဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပငျလယျကမျးရိုးတနျး တကြောပါပဲ ခငျဗြ။
တောငျပျေါဒသေတှကေတော့ အမြားစုက လအေား ကောငျးတယျလို့ တှကျခကျြ မထားပါဘူး။ လအေားလြှပျစဈ ထုတျလောကျအောငျ မကောငျးပါဘူး။ လကေ မွပွေနျ့ထကျစာရငျတော့ ပိုပွငျးရငျ ပွငျးမယျ။ တနရောပဲ ရှိပါတယျ။ မွောကျဘကျက ပူတာအို ပတျဝနျးကငျြပေါ့နျော။ မွနျမာနိုငျငံမွောကျဘကျ ပူတာအို. ပတျဝနျးကငျြ တကြောကတော့ လအေား ကောငျးတယျလို့ မွပေုံထဲမှာလညျး ဖျေါပွထားပါတယျ”
မေးး. ။“ဒီ မွနျမာနိုငျငံမှာ လအေားလြှပျစဈ သုံးဖို့အတှကျ နရောတှေ တညျဆောကျမယျ ဆိုရငျ ဘယျလိုမြိုး ပုံစံနဲ့ စပွီးတညျဆောကျရမလဲ ရှငျးပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာမိုးကြျောသူ။. ။“အဲ ပထမတော့ လအေားကောငျးတယျ မကောငျးဘူး ဆိုတာကို နှဈနဲ့ လနဲ့ခြီပွီးတော့ တိုငျးတာဖို့ လိုပါတယျ။ စံနဈတကပြေ့ါ။ တိတိကကြ တှကျနိုငျမှ ကောငျးနိုငျတယျ ဆိုတာ သူက လအေားထုတျတာက သူက တိုငျထောငျတဲ့ နရောမှာ တိုငျ တခု တခုခငျြး ကနပွေီးတော့မှ ဒလကျတှလောမယျ။ တာဘိုငျလို့ချေါတဲ့ ဒလကျ အကွီးကွီးတှေ လာမယျ။ ပွီးရငျ တိုငျကနပွေီးတော့မှ စံနဈတကြ ကွိုတှနေဲ့သှယျတနျးပွီးတော့ အားကို ထုတျတဲ့သဘောပါ။ အဲဒီတော့ ဆောကျလုပျတဲ့ နရော မှားသှားမယျ ဆိုရငျ ဒီတိုငျကို ရှဖေို့မလှယျသလို နောကျပိုငျးမှာ မွခှေငျ့ပွုခကျြတို့၊ ပိုငျဆိုငျမှုတို့ ဘာတို့မှာ အခကျအခဲတှေ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ အတှကျ အဲဒီင်္အပိုငျးကို အမြားစုက ကုနျးပျေါမှာတောငျ ၂ နှဈကနွေ့ပီးတော့ ၅ နှဈလောကျကွာတဲ့ ပွငျဆငျမှုက ကွာတတျပါတယျ။ အဲဒီတော့ မွကွေီးရဲ့ ခံနိုငျရညျ အပိုငျးရယျ၊ လအေားရဲ့ အပိုငျးရယျကို စောငျ့ပွီးတော့ monitor လုပျပွီးတော့ တိုငျးမယျ။ ပွီးတဲ့ နောကျမှာမှ သခြော စံနဈတကြ အစီရငျခံစာနဲ့ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ပတျသကျပွီး ပတျဝနျးကငျြထိခိုကျမှု အနညျးဆုံး ဖွဈတဲ့ ပုံစံနဲ့ဆောကျပါမယျ ဆိုတဲ့ အစိုးရ သို့မဟုတျ နယျမွဒေသေ မွကွေီးရဲ့ ပိုငျရှငျတှေ ဆီမှာ ခှငျ့ပွူခကျြ တှယေူမယျ။ စာခြုပျတှေ ခြုပျမယျ။ ငှတှေေ ခြေးမယျဆိုပွီး နောကျထပျ ၂ နှဈ ၃ နှဈ ပွီးမှ တညျဆောကျတဲ့ အပိုငျးကို သှားပါမယျ။
တညျဆောကျတဲ့ အပိုငျးမှာလညျး ဒလကျကွီးတှကေ ပုံထဲမှာ ပွထားသလို အကွီးကွီးတှပေါ ခငျဗြ။ အကွီးကွီးတှကေ ရရှေညျမှာ ထုတျမယျ့ အား ကောငျးသလို လအေားလညျး ကောငျးတယျ ပေါ့နျော။ ဆိုတော့ အဲဒီလို အကွီးကွီးတှေ တညျဆောကျဖို့ အတှကျက တစစီကို ဆကျပွီး တပျတာမြိုး မဟုတျပဲနဲ့ တခုထညျးအနနေဲ့ ခိုငျခိုငျမာမာ ဖွဈအောငျ ထုတျလုပျရတာမို့ ကနြျောတို့က ဘယျကနေ ဝယျမှာလညျ။ နျောဝကေနေ ဝယျမယျ ဆိုရငျ အဝေးကွီးလာရမယျ။ ကုနျကစြားရိတျကလညျးမြားမယျ။ ဒါပမေယျ့ ကောငျးတာလေး တခုတော့ ရှိတာပေါ့နျော။ တရုတျနိုငျငံက ပွီးခဲ့တဲ့ ၅ နှဈလောကျ အတှငျးမှာ အကွီးအကယျြကို တပျဆငျ ပွောငျးလဲနတေဲ့ အတှကျကွောငျ့ တရုတျနိုငျငံ ထုတျပစ်စညျးတှကေို လှယျလှယျကူကူနဲ့ ဈသေကျသကျသာသာ ရနိုငျတယျ ဆိုတာက ကောငျတဲ့ သတငျးပါ။”
မေး။ ။ “ဟုတျကဲ့။ အခု လအေားလြှပျစဈကို ဘာကွောငျ့မြား အကွံပွုတာပါလဲ။ ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှမှော ဘယျလို ပွောငျးလဲသုံးလာလို့ မွနျမာနိုငျငံအတှကျကိုပါ ဒါမြိုး အကွံပေးတာပါလဲ။”
ဒေါကျတာမိုးကြျောသူ။ ။“ဟုတျကဲ့ခငျဗြ။ အဓိကကတော့ ကုနျကစြားရိတျပါ။ ကုနျကစြားရိတျက ဒီလအေားလြှပျစဈက ကုနျကစြားရိတျက အခုဆို ကမ်ဘာမှာ ဆိုလာပွီးရငျ ဒုတိယ အနညျးဆုံး အဆငျ့အထိ ရောကျလာနပွေီ။ နောကျပွီး မွနျမာပွညျမှာ လကျရှိပေးနရေတဲ့ လြှပျစဈ မီတာခထကျ နဲနဲပဲ ပိုမြားတယျ။ လအေားလြှပျစဈက။”
မေး။ ။“ဆိုတော့ ဒီလိုမြိုး မွနျမာနိုငျငံသားတှေ လြှပျစဈကို ပေါပေါမြားမြား သုံးနိုငျအောငျအတှကျ ဘာတှေ လုပျသငျ့လညျး နဲနဲ ခွုံပွီး ပွောပွပါ။”
ဒေါကျတာမိုးကြျောသူ။ ။ “ ဒီနေ့ ပွောတဲ့ ခေါငျးစဉျရဲ့ အဓိကအပိုငျးပါပဲ။ ပွနျပွညျ့မွဲ စှမျးအငျဆိုတဲ့ အပိုငျးကို ကနြျောတို့ ပွောငျးရပါမယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အဓိက ကောငျးတဲ့အခကျြက ဆိုလာကို အဓိကရမှာက မွနျမာနိုငျငံ အလယျပိုငျး။ ပွီးတော့ လအေားလြှပျစဈ ရမယျ့ ကမျးရိုးတနျးဒသေ၊ ပွီးတော့ ရအေားလြှပျစဈရတဲ့ ရှမျးပွညျနယျ အရှမွေ့ောကျပိုငျးနဲ့ မွောကျပိုငျးဒသေတှဆေိုတော့။ ဒသေတှကေ မထပျတဲ့ အတှကျကွောငျ့ အဲဒီ အပိုငျးတှကေို ခှဲခွားပွီးလုပျမယျ ဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံက smart grid လို့ချေါတာ ပေါ့နျော။ လြှပျစဈကို တကယျ့ကို ပွနျပွညျ့မွဲစှမျးအငျကို ရတဲ့ အပွငျကို သူ့ဟာသူ စံနဈတကလြေး သုံးသှားမယျ ဆိုရငျ အာဆီယံထဲမှာလညျး ထိပျ ကို ရောကျနိုငျတယျလို့ မွငျပါတယျ ခငျဗြ။"
မွနျမာနိုငျငံမှာ အဓိက လိုအပျနတေဲ့ စှမျးအငျကဏ်ဍ အတှကျ လအေားလြှပျစဈကို အားကိုးနိုငျတဲ့ အကွောငျး ဒေါကျတာမိုးကြျောသူက ပွောပွခဲ့တာပါ။